बेंगलोरले आइपिएल जित्ने चार आधार | Hamro Khelkud
बेंगलोरले आइपिएल जित्ने चार आधार
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई सफल खेलाडीको असफल टोली भन्ने गरिन्छ । टोलीमा हरेक संस्करणमा विश्व क्रिकेटका चर्चित खेलाडी भएपनि हालसम्म उपाधि जित्न सकेको छैन ।
भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीको नेतृत्वमा रहेको बेंगलोर पहिलो उपाधि जित्ने रणनीतिमा छ । गत फेब्रुअरीमा चेन्नईमा भएको आइपिएल अक्सनमा टोली सन्तुलन र उपाधिको लागि बेंगलोरले दुई खेलाडीलाई मात्र झण्डै ३० करोड भारु खर्चेको थियो ।
अक्सनमा अष्ट्रेलिया आक्रामक ब्याट्सम्यान ग्लेन म्याक्सवेललाई १४ करोड २५ लाख र न्युजिल्यान्डका अलराउन्डर काइल जामिसनलाई १५ करोड भारु खर्चेको थियो । म्याक्सवेलले तल्लोक्रममा आक्रामक ब्याटिङ गर्दा पार्टटाइम स्पिन बलिङ गर्ने गर्दछन् । जामिसनले तीव्र गतिमा बलिङ गर्दा तल्लोक्रममा ठूला सटको क्षमता राख्छन् ।
बेंगलोर पछिल्लो पटक सन् २०१६ मा फाइनलमा पुग्दै सनराइजर्स हैदराबादसँग ८ रनले पराजित भएको थियो । त्यसअघि बेंगलोर २००९ र २०११ मा फाइनलमा पुगेपनि उपाधि जित्न सकेको थिएन । यस पटक बेंगलोरले आइपिएल अघि बलियो र सन्तुलित टोली निर्माण गर्दै उपाधिको प्रमुख दाबेदारी प्रस्तुत गरेको छ । गत सिजनमा प्ले अफबाट बाहिरिएको बेंगलोरले यस सिजनमा पहिलो आइपिएल उपाधि जित्न सक्ने चार आधार यस प्रकार छन् ।
बेंगलोरको बलिङ युनिट यस सिजनमा सन्तुलित छ । गत वर्ष बेंगलोरको तीव्र र डेथ ओभर बलिङ कमजोर थियो । यस सिजनमा बेंगलोरमा अष्ट्रेलिया केन रिचर्डसन, ड्यानिल साम्स, डेन क्रिष्टियनसँगै न्युजिल्यान्डका काइल जामिसन छन् । यी चार मध्य दुई खेलाडीले तीव्र गतिको बलरको रुपमा खेल्ने देखिन्छ । चार विदेशी खेलाडी कोटामा अन्य दुई ब्याट्सम्यान हुने छन् ।
रिचर्डसनलाई छोड्ने हो भने अन्य सबैले तल्लोक्रममा राम्रो ब्याटिङको क्षमता पनि राख्छन् । रिचर्डसन, साम्स र जामिसन डेथ ओभरमा राम्रो बलिङ गर्दै आएका छन् । भारतीय तीव्र गतिका बलरमा नवदीप सैनी र मोहम्मद सिराज छन् । स्पिनरमा भारतीय सिमित ओभरका प्रमुख स्पिनर युजभेन्द्र चहल, अष्ट्रेलिया एडम जाम्पा र शहवाज नदिम लगायतका स्पिनर छन् । यस सिजनमा बेंगलोरको बलिङ सन्तुलित छ । त्यसैले उपाधि यात्रा सहज बन्न सक्छ ।
३. बलिङमा विकल्प हुनु
पछिल्लो संस्करणहरुमा बेंगलोरको तीव्र गतिको बलिङ हारको प्रमुख कारण बन्दै आएको छ । गतवर्ष बेंगलोरसँग तीन मात्र विदेशी खेलाडी थिए । डेल स्टेन, इसुरु उडाना र क्रिस मोरिस । डेल स्टेनको खराब प्रदर्शन पछि उडानले मौका पाए । बेंगलोरले उडाना र मोरिसलाई मैदान उतार्यो । यी दुई मध्य एकले खराब प्रदर्शन गर्दा परिवर्तन गर्ने अर्को बलर थिएन । जसले गर्दा तीव्र गतिको बलिङ कमजोर थियो ।
उक्त कमजोर बलिङ सुधारको लागि जामिसनमाथि पैसाको वर्षा गराएको थियो । यस सिजनमा जामिसन र रिचर्डसन पहिलो रोजाईमा खेल्ने छन् । यी दुई खेलाडी मध्य एकले खराब प्रदर्शन गर्दा डेन क्रिष्टियन र ड्यानियल साम्स राम्रो विकल्पमा हुने छन् । टोलीमा स्थान बनाईराख्न मौका पाएको खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । टोली भित्रै उच्च प्रतिस्पर्धा हुँदा त्यसको फाइदा नतिजामा हुनेछ ।
२. विराटको लय र उपाधि भोक
कप्तान विराट कोहली राम्रो लयमा छन् । आइपिएल अघि विराटले इंग्ल्यान्डविरुद्ध पाँच टि२० आई सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । विराटले दोस्रो टि२० आईमा ७३ र तेस्रोमा ७७ रनको अविजित इनिङ खेलेका थिए । अन्तिम टि२० आई खेलमा विराटले ओपनिङ गर्दै ८० रनको अविजित इनिङ खेलेका थिए ।
सर्वाधिक भरपर्दा ब्याट्सम्यान विराटले यस सिजनमा ओपनिङ गर्दै छन् । विराटले आफ्नो विकेट हतपत गुमाउँदैनन् । विराटले एकतर्फबाट राम्रो साथ दिँदा अर्को इनिङबाट डिभिलियर्स र ग्लेन म्याक्सवेललाई ठूलो इनिङ खेल्न सहज हुने छ ।
कोहली क्रिजमा रहँदा सम्म बलरलाई दबाबमा राख्ने गर्दछन् । अर्कोतर्फ विराटमा आइपिएलको उपाधिको भोक र दबाब दुबै छ । रोहित शर्माले मुम्बई इन्डियन्सलाई पाँच आइपिएल उपाधि जिताउँदा कोहली असफल हुँदै आएका छन् । धेरैले कोहलीलाई हटाएर रोहितलाई भारतीय टि२० टोलीको कप्तान बनाउनु पर्ने अवाज समर्थक उठाउँदै आएका छन् । कोहली त्यसैले उपाधि खडेरी तोड्न हर प्रयास गर्ने छन् ।
१. डिभिलियर्स र म्याक्सवेल टोलीमा हुनु
विश्व क्रिकेटका दुई विष्फोटक ब्याट्सम्यान एवि डी भिलियर्स र ग्लेन म्याक्सवेल बेंगलोरमा छन् । म्याक्सवेल र डी भिलियर्सले एकै ओभरमा खेललाई मोड्न सक्ने क्षमता भएका उत्कृष्ट पावर हिटर ब्याट्सम्यान हुन् । डी भिलियर्स मैदानको जुनसुकै भागमा चौका र छक्का प्रहार गर्न सक्ने अद्धभुत क्षमता भएका खेलाडी हुन् ।
टि२० क्रिकेटमा यी दुई ब्याट्सम्यान क्रिजमा रहँदा पनि बलरलाई दबाब महसुस हुन्छ । गतवर्ष डी भिलियर्स नचलेको खण्डमा बेंगलोरको फिनिसिङ कमजोर हुने गर्दथ्यो । तर यस सिजनमा डी भिलियर्स नचल्दा म्याक्सवेल तथा म्याक्सवेल नचल्दा डी भिलियर्स छन् । यी दुई ब्याट्सम्यानलई छक्का चौकाको वर्षाको साथ विशाल योगफल बनाउन र पूरा गर्न सक्छन् ।
डी भिलियर्सलाई दक्षिण अफ्रिका टोलीबाट विश्वकप खेल्न उच्च प्रदर्शन गर्नुपर्ने दबाब पनि छ । आक्रामक ब्याटिङ गर्ने वातावरण ओपनर कोहली र देवदत्त पाडिक्कलले गर्ने छन् । गतवर्ष बेंगलोरबाट डेब्यू गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका पाडिक्कल यस सिजनमा पनि उच्च लयमा छन् । भारतीय घरेलु क्रिकेट विजय हजारेमा पाडिक्कलले लगातार चार शतक प्रहार गरेका थिए ।
पाडिक्कले खराब प्रदर्शन गरेमा भारतीय क्रिकेटमा उच्च प्रदर्शन गर्दै आएका मोहम्मद अजहरुद्दिन पनि टोलीको राम्रो विकल्प हुन् । एवि डिभिलियर्स र म्याक्सवेल जस्ता विष्फोटक ब्याट्सम्यान टोलीमा हुँदा पहिलो पटक उपाधि जित्न सक्छ ।
रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर २०२१ : विराट कोहली, एबि डिभिलियर्स, युजभेन्द्र चहल, देवदत्त पाडिक्कल, वासिन्टन सुन्दर, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, एडम जाम्पा, शहवाज नदिम, फिन एलेन, केन रिचर्डसन, पवन देशपान्डे, ड्यानियल साम्स, हर्षल पटेल , काइल जामिसन, ग्लेन म्याक्सवेल, डेन क्रिष्टियन, सचिन वेबी, राजत पतिदार, मोहम्मद अजहरुद्दिन, सिकर भारत र सुयस प्रधुदेसमई ।